Carlos Ghosn: Namantsipantsika ny Mpampanoa lalàna japoney izy
jeudi, 09 janvier 2020 09:40
Omaly tolak'andro 08 janoary tao Liban no namory mpanao gazety i Carlos Ghosn, filoha tale jeneralin'ny Renault - Nissan teo aloha.
Nanazava izy fa tsy nandositra tany Japon akory, fa niala ny tsindry sy ny tsy fanajana ny zon'ny voapanga sy ny zon'olom-belona.
Tsy nety nilaza ny fomba nataony nitsoaka an'i Japon izy, ho fiarovana ireo olona maro nanampy azy tamin'izany hoy izy.
Namatrapatratra ity tale teo aloha ity, fa ny tompon'andraikitry Nissan no niray tsikombakomba tamin'ny Mpampanoa lalàna japoney mba hanilihina azy tsy ho tale jeneralin'ity gropy mpanamboatra fiarakodia ity, satria nahatsapa ny Nissan fa voatsindrin'ny Renault, izay mpanamboatra fiara frantsay.
17 taona hoy izy no niasany ho an'ny Nissan sy Renault anavotana an'ireo orin'asa efa saika maty ireo, ary nangatahan'ny Général Motors, orin'asa mpanamboatra fiarakodia amerikanina izy fa tsy nandeha, na dia nahazo karama indroa noho ny nomen'ny Nissan sy Renault azy, ka tsy resa-bola mihitsy izany no angalariny, izay misy an-tanatohatra marobe vao mivoaka ny volan'ny orinasa.
Nilaza izy fa misy mpitondra ambony japoney no mitady anagadra azy izao mba handetehana azy. Maro ireo anarana notanisainy ao ambadik'izao fanilihana azy hiala izao, ka anisan'izany ny tompon'andraikitra ambony Nissan, ny Mpampanoa lalàna, ny mpitondra ambony Japoney, ny commissaire aux comptes japonais.
20 miliara dolara hoy izy ny tombom-barotra navelany ho an'ny gropy rehefa nisitaka izy, amin'izao anefa dia miletika i Nissan sy Renault ary mipatitaka ny fampiraisana ireo orinasa ireo, fa samy maka ho azy.
Hita nanana lolom-po tamin'ny frantsay izy, na dia tsy nilaza nivantana, satria ny mpitondra frantsay dia tsy niaro azy mihitsy tamin'izao nahazo azy izao, satria nisafidy ny tsy hiditra fifandonana amin'i Japon.
Nilaza i Carlos Ghosn fa vonona hanome ny traik'efany ho an'ny Liban raha misy mangataka izany.
Nahavariana moa no nijery an'ity tale jeneraly ity, fa dia nanana hery tokoa hiaro tena, ary voafehiny ireo tahiri-kevitra izay nasehony, miteny fiteny maro izy, ary dia tsy miambahamba mihitsy mamaly ireo mpanao gazety amin'ny fiteniny avy na amerikanina, na brezilianina, na italianina, na portugais, na japonnais, na frantsay ary libanais mazava ho azy.
Mizaka ny zom-pirenena frantsay, libanais, brésil ny lehilahy.